Hiiraan miyeey ka maaranta jowhar – Biyacade
September 7, 2016 September 7, 2016 biyacade
Hiiraan miyeey ka maaranta jowhar
Ninka isu sheegaya ugaaska beesha xawaadle ahaana mid nin hogaamiye kooxeed yadii la soo hsaqeeyay ayaa caqabad ku nqoday dhisida maamul la doonayo in lagu mantaaneeyo baladweeyn iyo jowhar.
shabeellada dhexe waxa uu ka mid yahay goballada ugu hodan dalka soomaaliya waa gobal ku qanagsan beerashada wuxuuna leeyahay xaabta ugu dheer ee goballada soomaaliya.
hiiraan ayaan heeysan qax dakad ah waana dhul buuraaley ah balse ayafu waxeey isu aragtaa in ay is maareeyn kartaan. waxeeyna reer hiiraan gaar ahaanbeesha xawaadle dooneeysaa e gobalka shabeellada dhexe ay qeeyb muhiim leh ka qaadato hiiraanna la gooni noqoto.
dhanka kale abgaal ayaan iyana ka liidan dhanka xifaaltanka waloow ay abti u yihiin reer xawaadle hadana waxaan muuqan cisa iyo sharaf ay doonayaan reer hiiraan.
Si kastaba waxaan sugnaa reef xawaadle iyo abgaal halka ay ku mantaanoobi lahaayeen.
Previous Cuna qabateeyn la saaray keenya
Next Ciid wanaagsan meel walba oo aad joogtaan